Pinguy OS Mini 11.10 ရရှိနိုင် | Linux မှ
Pinguy OS Mini 11.10 ရရှိနိုင်ပါပြီ
မှ Webupd8 (ယခင်ဆောင်းပါးမှယူထားသောပုံ) သူတို့က၏ပစ်လွှတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြား Pinguy OS Mini၏တိုတောင်းသောဗားရှင်း Pingoy OS ဒါပေမယ့်သူ့အစ်ကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများအများအပြားပါဝင်သည်။
Pingoy OS တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း, ပေါ်အခြေခံကာ Ubuntu ကို, ဘယ်တော့မှမသုံးဖူးသောလူများအတွက်ဒီဇိုင်း Linux ကို မတိုင်မီသို့မဟုတ်ရုံချင်သောလူများအတွက် operating system ကို လတ်ဆတ်သောမိတ္တူတစ်လုံးတပ်ဆင်သောအခါတစ် ဦး ချင်းစီလုပ်ဆောင်ရမည့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်တိုးတက်မှုများကိုမပြုလုပ်ဘဲအလုပ်လုပ်စေပါ Ubuntu ကို သို့မဟုတ်အခြားသူများ Linux ဖြန့်ဝေမှုများ.
Pinguy OS Mini 11.10 အပြည့်အဝဗားရှင်းနဲ့တူလှပါတယ်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည် သရက်, ကွန်ကရစ် နှင့်အတူတူပင် extension များ GNOME Shell က သူ့အစ်ကိုထက်။ သင့်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အက်ပ်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ Nautilus, GNOME Tweak Tool, Firefox, Boot Repair စသည်ဖြင့်အခြားစနစ်များမှအခြားကိရိယာများအကြား။ ၎င်းတွင်ပုံမှန်ဆက်တင်များပါဝင်သည်။ zRamအမျိုးမျိုးသော extension များ Firefox ကို, codecs နှင့် Adobe Flash မူလက။
အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်သုံးတဲ့အချက်က Ubuntu ကို အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှတားဆီးပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင် download လုပ်လိုပါကဤ link မှသင်လုပ်နိုင်သည်။
Pinguy OS Mini 11,10 Shell ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Pinguy OS Mini 11.10 ရရှိနိုင်ပါပြီ
ငါ distro ကိုသုံးဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူး၊ တကယ်တော့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး။ ငါအဲဒီမှာသုတေသနအချို့လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါနဲ့ငါအနည်းငယ်သုံးပြီးကြိုက်နှစ်သက်ရှိမရှိကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ pa 'နာမည်ကိုသွား။
စကားမစပ် Ubuntu ကိုငါအခြေခံပြီးသုံးတာကသင့်ကိုဘာကြောင့်တားဆီးတာလဲ။ ရဲရင့်ခြင်းနှင့် Eduar2 သည်သင်၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာလား။ ဟဟ
Hahaha to Pinguy ငါထူးဆန်းတာပဲဟဟဟားငါနာမည်ကနည်းနည်းလေးပြောတာ ..။
အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Ubuntu ကိုအခြေခံအဖြစ်သုံးတာကငါ့ကိုမတားဆီးဘူး
အကယ်၍ သင်သည် antiubuntu မဟုတ်ပါကကျွန်ုပ်သာလျှင်၎င်းသည်ယုတ္တိဗေဒရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။
မင်းရဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေကိုမထိခိုက်စေဘဲငါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကြည့်ပါ ဦး ။ ငါ Ubuntu ကိုမဆန့်ကျင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအဲဒါကိုငါကြိုက်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ Ubuntu မှာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာတော့သူတို့ကိုဘယ်သူမှအသုံးမပြုကြဘူး ...
သူတို့ကမင်းကိုမနေ့ညကအပြင်ဘက်မှာအိပ်ပျော်စေသလိုပဲ Courage ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံမှာလဲဟဟဟဟဟ၊
ငါယုံကြည်သည်မှာ၎င်းသည် antiubuntu မဟုတ်ကြောင်း၊ အမှန်မှာဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် elav <° Linux ၏အဆိုအရကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်အရ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်မှုနှင့်လေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီဒါကထင်မြင်ချက်ပဲ ..
Mask CorporatiOn အားပြန်ကြားပါ
Mask CorporatiOn ဆိုဒ်သို့…😀
ရရှိနိုင် Bluefish 2.2.0
အကျဉ်းချုပ် - Mozilla Firefox အတွက် RSS Reader